Archive du 20180303
Raharaha Houcine Arfa Mampiady ny samy mpitsara
Miteraka savorovoro eo amin’ny tontolon’ny Fitsarana ny nisamborana ny mpitsara mpanao famotorana iray anisan’ny nandray an-tanana ny raharaha Houcine Arfa, tao an-tranony ny alakamisy hariva tokony ho tamin’ny 7 ora.
Rajoelina sy ny IEM Ny mpandrava tsy mahay manangana
Antso ho an'ny mpiray tanindrazana mba hampitsaharana ny krizy sy ny disadisa izay mandrotika ny toekarena sy fiarahamonina Malagasy i Andry Rajoelina nandritra ny famoahaboasany ny Initiative Emergence Madagascar.
Fitondrana HVM Manjaka ny tsy fifampitokisana
Hita ho kaodikaody be ihany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’izao ankatoky ny fifidianana izao raha ny fihetsiny tato ho ato no jerena.
Hery Rajaonarimampianina Mitady hidongy seza
Matahotra sy mihorohoro fatratra ny tsy ho lany intsony ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ary azo antoka ny tsy hahatafaverenany amin’ny sezany intsony raha madio sy mangarahara ny fifidianana.
Mpitondra HVM Miantso ny Rosianina hitrandraka harena eto ?
Tonga tany Moscou Renivohitr’i Rosia omaly ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny delegasionina maromaro miara-dia aminy.
SeFaFi Tsy afa-po amin’ny fanomanana ny fifidianana
Toy ny fanaony isan-taona dia nampahafantatra ny tombana mikasika ny fanarahany maso ny fiainam-pirenena tamin’ny taona 2017 tetsy amin’ny toerana iray etsy Ambodivona omaly ny avy eo anivon’ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ny Sefafi.
Antenimieram-pirenena Volavolan-dalàna telo no lany omaly
Depiote nanodidina ny 50 no tonga namonjy ny fivoriana nitambarambe omaly zoma 2 martsa 2018.
Andraso eo Paoly....
Volana martsa, volana vaovao Fiainana tsy miova, ny eo ihany no ao. Niakatra indray ary ity vidin-tsolika, Inona indray no ho vokany, sao re dia hamotika ?
Tsena Petite Vitesse Hiova endrika sady hanara-penitra
Mitohy ny fanatsarana ireo tsena eto Antananarivo Renivohitra ny fiadidiana ny tanàna, tarihin’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana. Hita izany etsy amin’ny Esplanade Analakely, Anosibe, Soarano, Andravoahangy.
Fisondrotan’ny vidin-jiro Miantraika amin’ny fihariana rehetra
Tsy misy izay tsy mikaikaika na orinasa na olon-tsotra ny amin’ny fiakaran’ny faktioran’ny Jirama. Saika voakasika daholo ny sarambabem-bahoaka na ny mpandraharaha na ny mpiasa tena ka mahatonga fimenomenona.
Lapan’ny tanàna Analakely Tsy namboarin’i Andry Rajoelina izany
Nivoaka ny vaovao marina momba ny lapan’ny tanànan’Antananarivo taorian’ny nanambaran’i Andry Rajoelina, filohan’ny tetezamita teo aloha fa vokatry ny ezaka nataony no angady nananana sy vy nahitana io fotodrafitrasa io.
Arina fandrehitra Mila hitovy amin’ny vidina “gaz” ny iray gony
Tsy mitsaha-miakatra ny vidin’ny saribao amin’ny gony amin’izao eny an-tsena. Efa misy mahatratra hatrany amin’ny 25.000 Ar mantsy ny iray gony lehibe amin’ireo saribao kininina raha 16.000 Ar kosa no mora indrindra amin’ireo karazany antsoina hoe : tsorany.
TOP GASY Hanomboka anio ao amin’ny Top Radio 102.8
Hanomboka anio sabotsy 3 martsa amin’ny 2 ora tolakandro ny fandaharana vaovaon’ny Onjam-peo Top Radio 102.8 FM, nampisalorana ny anarana hoe “Top Gasy”.
Fikambanana TAMBOHOBE Hiatrika ady amin’ny herisetran’ny fananan-tany
Tao anatin’ny lanonana fifampiarahabana nahatratra ny taona 2018 notanterahin’ny fikambanana TAMBOHOBE (TAnora MBOla HO BEazina) tarihin’ny filohany, Rabenjamina Willy tetsy Ampahibe omaly,
Baolina kitra Ligue 1 Analamanga Miditra amin’ny andro faha-3 sy faha-4 ny fifaninanana
Miditra amin’ny andro faha-3 sy andro faha-4 ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondaka 2018 ho an’ny Ligue 1 eto amin’ny ligin’Analamanga amin’ny baolina kitra.
Basikety Amboaran'ny Filoha andiany faha-4 Miatrika ny manasa-dalana avokoa anio ny Faritra 2 farany
Ireo lalao manasa-dalana hotontosaina ao amin'ny kianja mitafon'Ambatomena Fianarantsoa ho an'ny faritra Afovoany Atsinanana anio sabotsy 3 martsa 2018 :
Ny mpilalao taranja rugby à XV malaza eto amin’ny tanàna sady reharehan’ity taranja ity hatrany ampitan-dranomasina any no vahinin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena eto amin’ny Tia Tanindrazana anio sabotsy 3 martsa 2018.
Iza no tsy hirotsaka ?
Sahiran-tsaina ny olom-pirenena teo aloha teo nametra-panontaniana hoe « iza re no hofidiana ee ? » Ireo mpikirakira vaovao moa tetsy an-daniny dia mba velom-panontaniana koa hoe « Iza avy ireo kandida ? ».
Angovo azo havaozina Hamoraina ny haba aloa
Notanterahina omaly tetsy amin’ny hotely Carlton ny atrikasa ny amin’ny fanatsarana ny sehatra ara-ketra ho an’ny angovo azo havaozina. Efa manomboka miroborobo ny famokarana herinaratra amin’ny alalan’ny angovo azo havaozina eto Madagasikara.
Distrikan’i Betroka Anjakan’ny tsy fandriampahalemana sy fifamonoana
Mandry tsy lavo loha ny mponina any Betroka ankehitriny, raha ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanana Andrimaso, Ajad Ridji Razafindrazanaka, izay misehatra amin’ny fampanjakana ny fandriampahalemana any an-toerana.
Bala 10 900 hita teny Analakely Nangina ny raharaha
Tsy dia heno na tsy nisy tohiny hatreto ny momba ny raharaha fahitana bala miisa 10 900 tamina vata vy miisa 8 hita tamina trano iray teny Analakely ny 16 febroary lasa teo.
Fanjifana “Whisky” Tena niroborobo fatratra
Tato ato dia manahirana ny mitady Whisky, indrindra ireny vita avy any ivelany ireny. Efa vitsy ny toeram-pivarotana mivarotra ary somary niakatra ny vidiny.